Wasiirka Waxbarashadda Somaliland Oo Mamnuucay Lacago Laga Qaado Ardayda
Hargeysa(Gebogebonews)-Wasiirka wasaaradda waxbarashadda iyo sayniska ee Somaliland ayaa soo saartay tallaabooyin iyo shuruuc lagu mamnuucayo lacago sharci darro ah oo ay dugsiyadda waxbarashadu ardayda ka qaadaan.
Lacagahan ay wasaaradda waxbarashadu ka mamnuucday dugsiyadda waxaa ka mid ah in aan ardayga lacag laga qaadi Karin haddii uu ka bedelanayo dusgiga uu dhigto iyo sidoo kale lacagta diiwaangelinta ee la qaado marka arday cusub la qorayo.
Go’aamadda kale ee ay wasaaradu soo soortay waxaa ka mida in la joojiyay in tiradda ardayda fasalka wax ku baranaysa aanay ka baan Karin 45 arday iyo in macalimiintu ay casharadda waraaqo ku soo qoraan kadibna ardayda lagu khasbo in ay soo rogtan.
Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashadda Somaliland Axmed Maxamed Diiriye (Toorno), oo maanta hadal ka jeediyay kulanka todobaad laha ah ee macalimiinta dugsiyadda iyo masuuliyiinta wasaaradda waxbarashadda.
Daawo: Wasiir Toorno Oo Arrimahaas Ka Hadlaya: